ညီလင်းသစ်: နောက်ကျသွားခဲ့ပြီ ဆိုရင်...
Posted by ညီလင်းသစ် au 19.12.11
အရင်တစ်ခါက ကွန်ပြူတာထဲ သိမ်းရမှာ စိတ်မချလို့ external hard disk ထဲပဲ သိမ်းထားမိတာ အဲဒါက အရင်ပျက်တော့ သိမ်းထားသမျှပုံတွေ ကုန်ရော။
အခုတော့ ကွန်ပြူတာထဲမှာရော external hard disk မှာရော သိမ်းတယ်။ အကို့လိုတော့ သုံးလေးလုံး မသိမ်းဖြစ်ဘူးဗျ။ DVD နဲ့ ပြန်ခုတ်ထားဖို့တော့ အစီအစဉ်ရှိပေမဲ့ အပျင်းကြီးနေသေးတယ် :)
ီဓါတ်ပုံသမား (လို့ပဲ ဆိုပါရစေ) တွေအနေနဲ့ကလဲ ခက်တယ်ဗျာ။ အပျော်တမ်း လက်တည့်စမ်းလောက်သာ ရိုက်တတ်သေးပေမဲ့ ကိုယ်ရိုက်ခဲ့တဲ့ ပုံတွေ ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး တော်ရုံကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဆို လုံးလုံးကို မဖျက်ရက်ဘူးဗျာ။
အကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် လုပ်တတ်တာကတော့ ဘလော့ကို ဝင်ဖတ်လိုက်တာနဲ့ကို မှန်းလို့ရပါတယ်ဗျာ။
အိုင်တီ သမားသာဆိုတယ်။ အကို့လောက်တောင် ၀ီရီယ မရှိဘူး။ မခံခဲ့ရဘူးလား ဆိုတော့ ခဏခဏ ခံခဲ့ရဘူးတယ်။ အဆိုးဆုံးက တခါ သူငယ်ချင်းတွေ စုပြီး ရီကောတင်း လုပ်ထားတဲ့ဟာ ဒီနေ့ သိမ်းထားပြီး မနက်ဖြန်မှာ ဟဒ်ဒစ် ပျက်သွားတာပဲ ကော်ပီလဲ မရှိ အားလုံး ပင်ပင်ပန်းပန်း တစ်နေ့လုံး တစ်ညလုံး လုပ်ထားတော့... စိတ်ဓါတ်ကျတာ ဘာပြောကောင်းမလဲ... အခုထိလဲ မမှတ်သေးပါဘူး... :D
ဒါပေမယ့် အကိုပြောလို့ စိတ်မှာတော့ တေးမှတ်ထားလိုက်မိပြီး... လုပ်သင့်ပါတယ်။ အကို့နည်းလမ်းက တော်တော်လေး ကောင်းပါတယ်။ ကျေးဇူးပါပဲ ခင်ဗျ...
နောင်တချိန်ပြည်လုံးကြိမ်မီးအုံးတော့မှ ဦးကောင်းမင်းမပြောရက်လေခြင်းလို့ ဖြစ်မှာကြိုသိပေမယ့် ဦးကောင်းနောက်ကျပြီကော..
အခုဆို အိမ်ကစက် ရုံးကစက် ပြီးတော့ အိတ်ဆောင်ထည့်တဲ့ အရာတွေထဲမှာပါ သုံးလေးခု ကူးပြီး ထားတယ်။
ဒါပေမယ့် သင်္ခါရဆိုတာ ရှိသေးတယ် မဟုတ်လား
ကျနော်လဲ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုက်လို့ ဒေတာတွေ အကုန်လုံးနီးပါးပျက်ဖူးတော့ အခုတော့ ပျဉ်ဖိုးနားလည်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် တခါတလေတော့ မေ့တက်တယ်။ ကျနော်ကတော့ ဒီဗွီဒီနဲ့လဲ ကူးထားတယ်။ Word and Excel files တွေကိုတော့ မေးထဲတွေပါ ပို့တယ်။ ကိုတောင်ငူသားရေးသလိုပဲ ပုံတွေကလဲ မဖျက်ရက်ဘူး (မလှတာတောင်။) ကျနော်တို့ဆီမှာတော့ လက်တော့ပျောက်တဲ့ ပြသနာက ဆိုးတယ်ဗျ။ အထူးသဖြင့် B.S student လေးတွေက ယူတာများတယ်။ ကျနော့် ဂျူနီယာလေးဆို M.S တက်တုံးက လက်တော့ (၂)ခါပျောက်လို့ သူ့ရဲ့ သုတေသနကို (၂) ခါ လုပ်ရမယ့်အစား (၄) ခါ လုပ်လိုက်ရတယ်။
အကိုရေ ကွန်ပြူတာကို back up ဘယ်လိုလုပ်ရတာရယ် ဖုန်းကိုဘယ်လိုလုပ်ရတာရယ်လေးပြောပြပါလား
သတိပေးရကျိူးနပ်အောင်နဲ့ ယူကျုံးမရမဖြစ်ရလေအောင် လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါတော့မယ်ရှင်။
ကျွန်မက အရာရာကို သိတ်သတိမရချင်တဲ့သူရှင့်။ ဒါကြောင့် ဘက်ခ်အပ်ဘယ်တော့မှ မလုပ်ဖြစ်ဘူး။ အချိန်မရွေး တစ်က ပြန်စဖို့ အမြဲ အားမွေးထားတယ်။
ဒီပိုစ့်ဖတ်ပြီးမှဘဲ ကိုယ့်အကြောင်းကို ပြန်ဖော်လိုက်ပါဦးမယ်
ဘလော့ပေါ်မှာတောင် တင်မရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းလေးပါ.
ပြီးခဲ့တဲ့ ၄လပိုင်းတုန်းက လက်ပ်တော့ပျောက်သွားတယ်။
နှမြောတာက အဲဒီလက်ပ်တော့ထဲမှာ ရေးလက်စ စာတွေ၊ စာရေးဖို့ စုထားရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဖိုင်တွေအကုန်ပါသွားလို့ ကျွန်မဖြင့် စိတ်ညစ်လိုက်တာ။ အရေးထဲမှာ ခရီးသွားတုန်းက ရိုက်ခဲ့တဲ့ ပုံတွေလည်း မင်မိုရီစတစ်ထဲမှာ အကုန်ပျက်သွားတယ်။ ဘလောဂ့်တောင် ဆက်မရေးနိုင်တော့ဘူးလို့ စိတ်ထဲက ထင်လိုက်မိတယ်။ back up လည်း ဘာတစ်ခုမှ လုပ်မထားသလိုခဲ့ဘူး။ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကံကောင်းတာက ရုံးချုပ်ကို လစဉ် report လုပ်ထားတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ လက မေလ်းထဲက ဖိုင်ကို ပြန်သိမ်းယူလိုက်ပြီး လစဉ် ပြန်လုပ်လို့ ရလိုက်တယ်။ ဘလော်ဂ့်အတွက်ကတော့အဲဒီတုန်းက ရေးလက်စ စာတွေ ခုချိန်ထိ ပြန်မဆက် မရေးဖြစ်တော့ဘူး ။ back up မလုပ်မိတဲ့ အကျိုးတွေပါဘဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကလည်း ဖုန်းပျောက်သွားတယ်.. ဖုန်းနံပတ်ကို စာအုပ်ထဲချမရေးဘဲ ဖုန်းထဲမှာဘဲ မှတ်တတ်တဲ့ ကျွန်မ ဘယ်သူ့ဖုန်းနံပါတ်မှ ကျန်မနေခဲ့တော့ ဒုက္ခများရသေးတယ်။ အင်း မကောင်းတဲ့ အကျင့်တွေ ချပြောမိပြီ။
နောက်ဆိုရင်တော့ ဘာမဆို back up လုပ်တဲ့အကျင့်ကို လုပ်ရတော့မယ် ကိုညီလင်းသစ်ရေ။ လက်ပ်တော့ ပျောက်သွားတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို သနားမိတယ်. သူတို့အတွက်တော့ တကယ်ကို အခက်ကြီးခက်ရှာမှာ ..
တစ်ကယ်ကိုပဲ ကျေးဇူးပါအကို... နည်းပညာနဲ့ အလှမ်းဝေးတဲ့ သူမို့ သတိထားပြင်ဆင်စရာ လေးတွေ အတွက် ကျေးဇူးပါလို့...
Hooooo.............Beingablogger and photographer is not easy.I already noticed that you areaSae sus the cher thu:D....I got so much knowledge and tks.
Back Up လုပ်ရမှန်းသိရက်နဲ့ မကြာခဏ ခံရပေါင်းများနေပြီ။ နည်းပညာတွေ ထွန်းကားလာတာ တဖက်က ကောင်းပေမယ့်၊ တဖက်က မကောင်းပြန်။ အရင်ကဆို စာရွက်ပေါ်ချရေးတော့ စာမူတွေက လက်ခံကျန်သေးတယ်။ အခုက ကွန်ပြူတာနဲ့ လက်တမ်းရိုက်တော့ ထိပြီဆို စာတစ်လုံးတောင် ပြန်မရတော့တာမျိုး။
အလုပ်မှာလည်း မီတင်မိနစ်တွေ အဲ့လိုနဲ့ ပျောက်သွားလို့ ဗျာများဘူးခဲ့တယ်။
သိသိကြီးနဲ့ ဆက်မိုက်နေတာပါပဲ။ အင်း..ပြီးရင် Blogလေး Back Up လုပ်ဦးမှ...။
ကွန်ပြူတာ သုံးသူတိုင်း သတိပြုသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးပါဘဲ။ ကျွန်တော်လဲ ဒီလိုကြုံဖူးတယ် အစ်ကို... external hard disk တစ်ခုထဲမှာ ဓာတ်ပုံတွေ၊ သီချင်းတွေ တခြားဆော့ဝဲတွေ အားလုံးကို သိမ်းထားတာ အဲဒါ မြန်မာပြည်ပြန်တုန်းက ဘယ်နားမှာ ဘယ်လို ပျောက်သွားတယ် မသိပါဘူး။ တစ်ခုတော်သေးတာက ကွန်ပြူတာထဲမှာ တော်တော်များများက မဖျက်ရသေးဘဲ ထားထားလို့သီချင်းတချို့ ကလွဲရင် ကျန်တာတွေ ပြန်ရခဲ့တယ်။ ခုလို သတိပေးတာ ကျေးဇူးအစ်ကို... အချိန်ပေးပြီး back up လုပ်ဖို့ ကို ကြိုးစားပါ့မယ်...
အမြဲလိုလိုကြားဘူးတယ်။ လူပေါင်းစုံတို့ ဆုံဆည်းတဲ့
ထင်တဲ့အတိုင်း ကောမက် မပေါ်တော့ဘူး... အစအဆုံး ပြန်မရေးချင်တော့ဘူး...
ကျေးဇူးပါ အကိုလို့ပဲ ပြန်ပြောချင်တော့တယ် :(
တကယ်ကို back up သမား
ပြန်ပြန်ပြီး back up လုပ်လွန်းလို့
back up မလုပ်ဖြစ်တာကြာပြီ။
ဒီစာလေးက လက်တို့ပြီး ပြောလိုက်သလိုပါပဲ။
ကိုယ်သိပ်ကြိုက်တဲ့ ၀တ္ထု ကဗျာလေးတွေက လွဲလို့ back up လုပ်ဖို့ အလွန်ပျင်းပေမယ့် လုပ်ရဦးမှာပါ။
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ စက်ထဲပဲဖြစ်ဖြစ် external disk ပဲဖြစ်ဖြစ် ကော်ပီ တစ်ခုတည်းဆို သိပ်စိတ်မချရဘူး၊ ဓါတ်ပုံတွေ ဆိုတာကတော့ ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ အမှတ်တရတွေ ပါပဲဗျာ..၊
ကျနော်လည်း သိပ်ဝီရိယ ရှိလှတယ်ရယ် မဟုတ်ပါဘူးဗျာ၊ ခံခဲ့ရဖူးလို့သာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပေး နေရတာ..၊ ရီကောဒင်း ပျက်သွားတာ နှမြောစရာကြီး...၊
အခါနှောင်းပြီ ဆိုလို့ “ဦးကောင်း” လည်း စိတ်မကောင်း ပါဘူး၊ အရှင်နှစ်ပါးကော..၊ ဂေါဝိန်ကို ရောက်နေကြ ပြီလား?းD
ဟုတ်တယ်နော်၊ အဲဒီ လက်ပ်တော့ပ်တွေက တကယ့်ကို သူခိုးမျက်စိ ကျစရာဗျ..၊ သုတေသန ၄ ခါ လုပ်လိုက်ရတဲ့ ကျောင်းသားတော့ စာကြေသွားမှာပဲ၊း)
ကွန်ပြူတာ back up က OS reinstallation disk တစ်ခု ဆောင်ထား၊ ဒေတာတွေ၊ ပုံတွေကို external disk ထဲမှာ ကော်ပီတွေ ကူးထားဖို့ပါ၊ ဖုန်း back up ကျနော်လုပ်တာတော့ ဖုန်းထဲက လိပ်စာတွေ၊ နံပါတ်တွေကို ကွန်ပြူတာထဲကူး၊ အဲဒီကမှ ပြင်ပဒစ်ခ် တွေထဲကို ထပ်ကူး..အဲဒါပါပဲ..၊
ဒီလိုဆိုတော့လည်း ဝမ်းသာရပါတယ်ဗျာ...၊း)
ဒါလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ ရှုထောင့်တစ်ခု ပါပဲ၊ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုကို ကိုယ်ကျေနပ်ဖို့ပဲ လိုတာ မဟုတ်လား...၊
ဒီပို့စ်ကို ရေးနေတဲ့ အချိန်မှာ မချောကို ကျနော် အထူးသတိရနေ ခဲ့တယ်၊ တခါတုန်းက မဲန်မိုရီ စတစ်ခ် ထဲက ခရီးသွားပုံတွေ ပျက်သွားတဲ့အကြောင်း ရေးဖူးလို့လေ..၊ အခု လက်ပ်တော့ပ်ရော ဖုန်းရော ဆိုတော့ မလွယ်ပါ့လား..၊ ဒီပစ္စည်းတွေက အခုခေတ်မှာ ပြန်ဝယ်ဖို့ သိပ်မခဲယဉ်းတော့ပေမယ့် အထဲက စာတွေ၊ ဓါတ်ပုံတွေ၊ နံပါတ်တွေက နှမြောစရာဗျာ...၊ မချော စိတ်ဓါတ်ကျသွားတာ ကျနော်တို့ နားလည်လို့ ရပါတယ်၊ ဒီလို ဆုံးရှုံးမှုမျိုး နောက်ထပ် မကြုံပါစေနဲ့တော့ လို့ပဲ ဆုတောင်းပါတယ်...၊
တတ်နိုင်သလောက်တော့ ကြိုးစားတာပဲ ဂျီးဒေါ်ရေ့၊း)
အမှန်ပဲဗျို့၊ စာရွက်ပေါ် ရေးတဲ့ခေတ်က ဘာပဲပြောပြော လက်ခံ ကျန်သေးတယ်၊ အခုတော့ ဗေထိ ဆိုတာနဲ့ ကွဲပဟ..ပဲ၊း)
အေးဗျ၊ အခုနောက်ပိုင်း external hard disk တွေကလည်း သေးသထက် သေးလာတော့ သူ့ကို မပျောက်ဖို့ကိုပဲ ပြန်ပြီး ဂရုစိုက်နေရ ပြန်ရော..၊း)
ဟုတ်ကဲ့..၊ ပုံမှန် လာအားပေးတာလည်း ကျေးဇူးပါနော်၊
ကွန်မန့်က စပန်းမ်ထဲ ရောက်နေတာဗျ၊ ဘယ်လိုက ဘယ်လို ဝင်သွားလဲ မသိဘူး၊ ကျနော် ပြန်ဆွဲထုတ် လိုက်ပါပြီ..၊း)
ကောင်းတာပေါ့ ညီမရေ..၊ ဒီလိုဆိုတော့ ညီမဆီမှာ လက်ခံကော်ပီတွေ အများကြီးမို့ တခုခုဖြစ်ရင် ပူစရာ မလိုတော့ဘူး..၊
ကျနော်လည်း ပျင်းပျင်းနဲ့ လုပ်နေရတာပါပဲဗျာ ..။
Me and my Chit Chit, we always back up our laptop data to external hard disk. So when my laptop broke down once, I have all my data back. I haven't done back up in blog yet, I'll do that. Thank you, Ko Nyi Linn.
တပါးကမဟာဂီရိမှာ တပါးကတော့ ရွှေတိဂုံမှာပါ
ကျနော်လည်း မှတ်ပုံတင်လေး ပျောက်တုန်းက အဲ့လိုပဲဖြစ်သေးတယ် ပိုက်ဆံအိတ်လေး ပျောက်သွားတော့ အရေးကြီးတဲ့ မှတ်ပုံတင်ပါ ပါသွားတာကိုး ဒီထဲက ကျောင်းသားတွေကို ကိုယ.်ချင်းစာမိပါရဲ့ တကယ်ကို ပူပင်သောက ရောက်ကြမှာ ခံစားမိတယ် ။ တစ်ချို့ အမှတ်တရတွေ ပြန်လုပ်ယူလို့မရတဲ့ အမှတ်ရဟောင်းတွေမှတ်လား သတိထားတာကောင်းတာပေါ့ ( ကျနော်ကတော့ ခဏခဏကိုထိနေတော့တား))
ဲJenifer Lopez ရဲ့ Back up plan ကို သတိရပြီး ပြုံးမိသေးတယ် အဲ့ ဒီ ကားက ရီရလို့ လေ မှတ်မိနေတာ
PC ဆိုရင်တော့ စကတည်းက Hard Disk ၂ လုံးထည့်ပြီး Mirroring လုပ်ထားတာကောင်းပါတယ်။ တစ်လုံးပျက်သွားလည်း နောက်တစ်လုံး ကျန်သေးတယ်ဆိုတော့ တပြိုင်နက်နှစ်လုံးစလုံး မပျက်မချင်း စိတ်ချရပါတယ်။ Back Up ကိုလည်း သူ့အလိုလိုလုပ်နေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် သတိထားနေစရာလည်းမလိုတော့ပါဘူး။
နောက်တစ်ခုကတော့ external drive တွေကိုလည်း IP configure လုပ်လို့ရတာဝယ်တပ်ထားရင် အရေးကြီးတာတွေကို External Hard drive ထဲမှာ ထပ်ပြီး သိမ်းလိုက်ဖို့လွယ်ကူစေပါတယ်။
ပိုက်ဆံပေါရင်တော့ online storage ကောင်းကောင်းဝယ်ထားပြီး monthly back up လုပ်ရင်တော့ စိတ်ချသထက် စိတ်ချရပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် သတိထားပြီး backup လုပ်နေတာထက် scheduler တစ်ခုခုနဲ့ schedule လုပ်တာက ပိုပြီး အဆင်ပြေစေပါတယ်။
Thesis တွေလုပ်တဲ့အခါမှာ one copy , one machine ထဲမထားဖို့ မြန်မာပြည်မှာတော့ ဆရာတွေက တစ်ခါတည်းသင်ပေးကြပါတယ်။ ရှေ့ကလူတွေလည်း ခံရကြပြီးပါပြီ။ floppy ခေတ်ကလူတွေဆိုရင် ဒါကို အမြဲသတိရှိကြရပါတယ်။
cloud storage တွေ ဈေးကျလာရင်တော့ အဆင်အပြေဆုံးဖြစ်လာမယ်ထင်ပါတယ်။
Backup နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ Portable တွေမှာသိမ်းတာကို သိပ်အားမပေးချင်ပါဘူး။ ဒါတွေက နည်းပညာအရ ပျက်လွယ်တဲ့အမျိုးအစားတွေဖြစ်နေတုန်းပါပဲ။ ဈေးပေါတဲ့ hosting တွေမှာသိမ်းတာလည်း hosting က hardisk ကြွသွားရင် ကိုယ်သိမ်းထားသမျှပါသွားနိုင်တဲ့အတွက် သိပ်အများကြီးယုံလို့မရပါဘူး။ ဈေးကြီးတဲ့ Hosting တွေမှာတော့ RAID5တွေဘာတွေသုံးတဲ့အတွက် hard disk ပျက်လို့ data lost တာမရှိတတ်ပါဘူး။
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် သတိရမှ သိမ်းတာထက် schedule လုပ်ထားပြီး အမြဲသိမ်းနေတာကပိုပြီး ထိရောက်ပါတယ်။
Hard Disks ၂လုံးထားပြီး Mirror လုပ်ထားပါ။
Hard Disks အသံမည်လာရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ bad sector တွေ့ရင်ဖြစ်ဖြစ် ချက်ချင်းလဲပါ။ External Storage Device ၀ယ်ထားပြီး၊ network storage drive လုပ်ထားပါ။
စိတ်ချရတဲ့ Online Hosting မှာ အရေးကြီးတဲ့ files တွေကို monthly Upload လုပ်ထားပါ။
ရေရှည်သိမ်းထားမယ့် Data တွေကို portable storage တွေမှာ မသိမ်းပါနဲ့။ DVD , CD တွေဆိုလည်း rewritable တွေမှာ မသိမ်းပါနဲ့။
ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရှိလှတဲ့ ကွန်မန့်အတွက် ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်၊ ဒီအထဲမှာ ကျနော်မေ့နေတာတွေ အများကြီး ပြန်တွေ့ရတယ်၊ ဥပမာ- PC ထဲကို နောက်ထပ် hard disk တွေ ထပ်ထည့်ဖို့ အစောကြီး ကတည်းက စဉ်းစား ထားပေမယ့် မေ့သွားတယ်၊ အခု ဒီကွန်မန့် ဖတ်မှ အဲဒီလို mirroring လုပ်ဖို့ စိတ်ကူး ပြန်ရတယ်၊ သိပ်ကောင်းတဲ့ အကြံဥာဏ်ပါပဲ၊ အရင်တုန်းကတော့ Schedule လုပ်ပြီး back up လုပ်လေ့ ရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဗိုင်းရပ်စ်ထိတဲ့ အဲဒီအခေါက်တုန်းက ဗိုင်းရပ်စ်က USB cable ကတဆင့် အမြဲ ဆက်ထားတဲ့external hard disk ထဲအထိပါ ဝင်နေတာ တွေ့လို့ ကျနော်က ဖြစ်နိုင်ရင် hard disks တွေကို PC နဲ့ အမြဲတမ်း ဆက်မထား ချင်တော့ဘူး၊ အဲဒါဆို EHD ကိုSchedule ချိန်အမီ ပြန်,ပြန်ပြီး ဆက်နေရမယ့်အတူ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ manually ကူးဖြစ်သွားတာ..၊
Online storage နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ ဘယ်ဟာတွေ ဘယ်လိုကောင်းလဲ ဆိုတာ သိပ်မသိတာနဲ့ အဲဒါကို သိပ်မစဉ်းစား ဖြစ်တာပါ၊ Network storage device စနစ်ကိုတော့ စိတ်ဝင်စားတယ်၊ IT မိတ်ဆွေ တချို့လည်း ပြောကြပါတယ်၊ သိပ်မကြာခင်တော့ သူ့ရဲ့ သဘောသဘာဝကို လေ့လာကြည့်ပြီး စမ်းမလားလို့ စိတ်ကူးနေပါတယ်၊ ထပ်ပြောပါရစေ..၊ back up နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အားနည်းချက်၊ အားသာချက်၊ အကျိုး၊ အပြစ်၊ လုပ်နိုင်တဲ့ အမျိုးအစား စသဖြင့် စုံစုံလင်လင်နဲ့ တချက်ချင်း အကြံဥာဏ်ပေးသွားလို့ တကယ်ပဲ ကျေးဇူး တင်ပါတယ်ဗျာ..။
back up အမြန် လုပ်မှ
အကိုရေ...ကျွန်တော်တော့ external hard disk ထဲ ရုပ်ရှင်
ထူးဆန်းတာက ဟက်ဒစ်တစ်ခုလုံးပျက်တာမဟုတ်ပဲ ရုပ်
လို့ရတဲ့ဟာမို့လို့...။အကို့လို လေးလုံးနဲ့တော့ ဘက်
လိုပဲ သံသယရှိနေဆဲပဲ...:)။(မအားလို့ ခုမှ မန့်ရတယ်
အကိုရေ...၊ပျော်ရွင်ကြည်နူးဖွယ် ခရစ်စမတ်နှင့် နှစ်ကူး